घ्युकुमारीको नियमित प्रयोगलेयस्तो बनाउँछ हजुरको शरीरलाइ एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला ! - Mitho Khabar
घ्युकुमारीको नियमित प्रयोगलेयस्तो बनाउँछ हजुरको शरीरलाइ एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला !
June 21, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on घ्युकुमारीको नियमित प्रयोगलेयस्तो बनाउँछ हजुरको शरीरलाइ एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला !
। पायल्स रोगका बिरामीहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छन्। दैनिक खानपानमा ध्यान नदिँदा यस्तो रोगको जोखिम झन बढ्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
क’ब्जियत नै पा’यल्सको मु:ल कारण हो ।जब कब्जियत हुन्छ, दिसा गर्दा बल पर्छ । त्यही बलले भित्रका रक्तशिरालाई तन्काइ दिन्छ । यो क्रमस फैलन थाल्छ र गिर्खा बन्न थाल्छ ।पायल्सका कारण मलद्वार दुख्ने वा पोल्ने हुन्छ।
काँचो केरा उसिनेर बिहान–बेलुका खाँदा पनि पायल्स रोगीका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । पायल्सका रोगीले तारेको/भुटेको तथा रेशारहित खाना खानु हुँदैन। कब्जियत हुन नदिन रेसा युक्त (फाइबर) खाना प्रशस्त खानुपर्छ। अलिभ (जैतुन)को तेल लगाउँदा पायल्सका विरामीहरुका लागि आराम मिल्छ ।
पायल्स भएको अवस्थामा बोसोयुक्त, तारेको, भुटेको, मसलेदार, मासुजन्य, दुधजन्य, मैदाबाट बनेका, कार्बोनेटेड ड्रीकं आदिको सेवन गर्नु हुँदैन । मदिरापान, धुमपानले पनि यसलाई जटिल बनाउँन सक्छ
तोकियो दुबई-काठमाडौँ उडान मिति, कति छ टिकट मूल्य ?
ऋणबाट सधैँका लागि मुक्त चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्